ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အနေအထားအသစ်ကိုရရှိပြီးနောက်အားနည်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်သူမ၏နေထိုင်မှုပုံစံကိုအကြီးအကျယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်မျှော်လင့်ထားသည့်မိခင်များသည်သူတို့၏အာဟာရနှင့်သုခချမ်းသာကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကြသည်။ သို့သော် ...
ဆေးလိပ်သောက်သူအများသည်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်အခြားသူများအတွက်သူတို့၏အလေ့အထကိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်ပြုလုပ်လိုသောကြောင့်အီလက်ထရောနစ်အငွေ့ပျံစေသောကိရိယာများသို့လှည့်ကြသည်။ ဒီနေ့ဒီအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့နည်းလမ်းကပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီ။ ကောင်းတယ် ...
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူများစွာဟာဘယ်မှာအလုပ်အတွက်ဆေးစစ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ နိုင်ငံတော်ဆေးခန်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများမှာထိုက်တန်သည့်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုသာရှိသည်။ အစိုးရဆေးခန်းအကြောင်းသူတို့အားလုံးမှာ ...
အောက်ပိုင်းခြေလက်များ (ခြေထောက်များ) သည်မျှမျှတတကြီးသောဝန်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဆောင်းပါးမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ခန္ဓာဗေဒအနိမ့်စွန်းရဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးကိုအားအမြင့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး "Raunatin": အဘယ်အရာကိုကူညီသနည်း ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု၏ဖော်ပြချက်
များသောအားဖြင့်ဆရာဝန်များသည်စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်လူနာများကို Raunatin ဆေးကိုညွှန်းသည်။ အဘယ်အရာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုကူညီပေးသည်နှင့်အဘယ်သို့၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ပါဝင်သည်? မည်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်ဆေးပြားနှင့်ကုထုံးကိုသောက်ရန်လိုသနည်း။
အထူးသဖြင့်အာရုံကြောစနစ်၏ပြသနာများကိုတွေ့ရှိပါကလူနာ၏တိုင်ကြားချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်း၏အခြေအနေကိုလေ့လာရန် ဦး ခေါင်း၏တွက်ချက်ခြင်း (tomogram) ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဒါကတစ်ခုပါ ...
Immunological blood test ဆိုတာလူနာရဲ့ပြင်းထန်သောဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆေးပညာနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများကအသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရောဂါရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကာကွယ်ရေးအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း ...
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည်အူသိမ်အန်ဂျရီ (Cervical အူ) သည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မညီမညာဖြစ်နေသောအင်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးရောဂါဗေဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနာအားလုံးအတွက်ဤရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာများနီးပါးတူညီကြသည်။ လူတစ်ယောက်သည်လည်ပင်း၊ ဦး ခေါင်း၌နာကျင်မှုခံစားရသည်။
Anticholinergic မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် cholinergic receptor များအပေါ်တွင်သဘာဝဖျန်ဖြေသူ၊ acetylcholine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးသောဆေးများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားစာပေများတွင်ဒီဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကို“ delirium” ဟုခေါ်သည်။
Resorcinol ၏ကုထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှာအဘယ်နည်း။ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ဤဆေး၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု, ထုတ်လုပ်ပုံစံများ resorcinol ကဘာလဲ? အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များကဤပစ္စည်းသည် ...
ဦး နှောက်မှ ischemia, လေဖြတ်ခြင်း, နှလုံးရောဂါနှင့် encephalopathies လေးနက်သောရောဂါများအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ မကြာခဏသူတို့ကဆိုးဝါးဖြစ်ကြသည်။ ဦး နှောက်ရောဂါဗေဒအမြောက်အများထဲတွင် encephalopathy သည်အထူးအာရုံစိုက်ထိုက်သည်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်ရောဂါအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ...
လူ့ကျန်းမာရေးသည်အမြဲတမ်းပထမနေရာ၌ရှိနေလိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူများစွာသည်ပြည်နယ်ဆေးပညာသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆေးဝါးများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခဲ့ပြီဟုထင်မြင်ယူဆကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူနာများသည်ပုဂ္ဂလိကဆေးကျောင်းများသို့သွားလိုကြသည်။
အဆိုပါဆေးဝါး Biltricid: analogues, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Helminthiasis သည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသာမန်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုထုံးမရှိခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆေးပညာသည်ကပ်ပါးကောင်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းစေသောကိရိယာများကိုပေးသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခု ...
Senna ဆေးဖက်ဝင်အပင်ကိုရိုးရာဆေးပညာတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်ဆေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောထိုင်ခုံများနှင့်မစင်အူများကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည့်ရောဂါဗေဒများကိုဖယ်ရှားရာတွင်လည်းကောင်းအသုံးပြုသည်။ ရည်ညွှန်းသည် ...
Bronchial ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်နာတာရှည်ခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသောနာတာရှည်မတည့်သည့်ရောဂါဖြစ်သည်။ ဤရောဂါသည်ကလေးများရောလူကြီးများတွင်ပါဖြစ်ပွားသည်။ နှစ်စဉ်ဒီရောဂါဗေဒခံစားနေရတဲ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်။
မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ကနေအရည်ထွက်လာတာကိုမင်းသတိထားမိလား။ ငါထိတ်လန့်သင့်သလော ဒါမှမဟုတ်ဒါကအတော်လေးပုံမှန်လား။ ရင်ဘတ်မှအဘယ်အရာကိုရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာကို? မင်းအတွက် ...
နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ စပျစ်သီးသည်လူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးတွင်မွေးမြူခံရပြီးမပြောင်းလဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရ၏။ ကဗျာများ၊ ဒဏ္,ာရီများ၊ သီချင်းများတွင်မကြာခဏကျူးလွန်လေ့ရှိသည့်အခြားအပင်တစ်ပင်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
လက်ရှိတွင်ဆေးသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးနေသည်။ တစ်ချိန်ကလက်တွေ့မကျပုံရသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ယခုအခါစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများသည်ရင်သား၊ နှုတ်ခမ်းကိုတိုး။ နှာခေါင်းပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,677 စက္ကန့်ကျော် Generate ။